चिटिक्क शौचालयभित्र भव्य पुस्तकालय युरोपमा देखेको सपना, आफ्नै ठाउँमा पूरा भयो
मिलन बुढाथाेकी विराटनगर - शनिबार, कात्तिक २२, २०७७
सात वर्षअघि पारिवारिक भ्रमण युरोपमा थियो।
युरोपेली देशमा घुम्दै गर्दा मोरङको विराटचोकका व्यवसायी भोलेश्वर दुलालले देखे, सार्वजनिक शौचालय।
शौचालय त शौचालय नै हो, नदेखिएको पनि होइन। थाहा नभएको पनि होइन।
तर, त्यहाँका सार्वजनिक शौचालयमा शौचमात्रै होइन, सिक्नुपर्ने धेरै कुरा थिए।
शौचालयमै त्यत्तिधेरै सेवासुविधा!
भ्रमणभरि उनी हुटिहुटिइरहे, हाम्रो देशमा यस्तै शौचालय किन नबनाउने?
युरोपबाटै फर्किनासाथ उनी योजनामा जुटिहाले।
सार्वजनिक शौचालयमै पुस्तकालय चलाउनका लागि उनले ‘मास्टर’ प्लान बनाउन थाले।
आफ्नै ठाउँ सुन्दरहरैँचामा त्यसका लागि डिजाइन गर्न इन्जिनियरहरूलाई जिम्मा दिए। त्यसको सम्भाव्यताका लागि आफ्नो व्यापारी वृत्तमा छलफल चलाए।
‘युरोपबाट फर्केपछि मेरो ध्यान यो प्रोजेक्टमा गयो, स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै यसको डिजाइन तयार पारेर समुदाय तहमा छलफल चलाइसकेको थिएँ’, उनले भने, ‘धेरै ठाउँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि देशमै नमुना काम हुन्छ भनेर हामीले कम्मर बसेर लागि परेका थियौँ।’
पालिकाभित्रको मुख्यबजार क्षेत्र विराटचोकमात्रै होइन, अरु ठाउँ ठाउँमा त्यस्तै कन्सेप्ट तयार भयो।
सलकपुर, हरैँचा, खोर्साने, मृगौलिया, बलिया, गोठगाउँ र गछियालगायतका ८ ठाउँमा सुविधासम्पन्न शौचालय र त्यसको माथिल्लो तलामा अत्याधुनिक इ–लाइब्रेरी बनाउने निर्णय भयो।
जसका लागि केही स्थानामा जग्गा खरिद भयो र केही ठाउँमा निःशुल्क जग्गा भेटियो।
झण्डै १३ करोडको बजेट इस्टिमेट भयो। अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको विराटचोक र सलकपुरमा शौचालय बनिसकेका छन्।
महिला पुरुष र अशक्तका लागि बेग्लाबेग्लै शौचालय र स्नानघर छन्।
रजस्वला भएका महिलाका लागि प्याडको पनि व्यवस्था छ।
‘सुरुका ६ महिनासम्म बिनाशुल्क शौचालय र पुस्तकालयको सेवा लिन पाइन्छ भने त्यसपछि सामान्य शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने।
शौचालय प्रवेश गर्नका लागि सुरुमै मेसिनमा सिक्का खसाउनुपर्नेछ, अनिमात्रै ढोका खुल्छ। पुस्तकालयका लागि १ हजार रुपैयाँ तिरेर वार्षिक ग्राहक बन्न पाइनेछ।
पुस्तकालयका भित्र सुविधासम्पन्न वातानुकुलित कोठा रहेका छन्। एक बैठक हलसमेत छ। इन्टरनेटको पनि सुविधा छ।
बैठक हलमा जुनसुकै सामाजिक संस्थाले छलफल गर्न पाउने छ। त्यसका लागि शुल्क लाग्दैन।
पालिका भित्रका अन्य ६ स्थान हरैँचा, खोर्साने, मिर्गौलिया, बलिया, गोठगाउँ र गछियामा शौचालयको काम अघि बढिरहेको र २ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने नगरप्रमुख शिवप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
यसका लागि नगरपालिकाले वर्षभरि सन्चालन हुने सबै योजनाबाट २ प्रतिशत रकम काटेर सहयोग गरेको छ।
‘हामीले शौचालयलाई ५ भागमा उपयोग गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सुविधा सम्पन्न ठाउँमा शौच गर्ने व्यवस्था, व्यापारिक प्रयोजन, सुविधासम्पन्न लाइब्रेरी र इ–लाइब्रेरी, शौचालयबाट उर्जा उत्पादन र विपन्न परिवारलाई उद्धार गर्ने गरी बहुउदेश्य सेवा हाम्रो प्राथमिकता हो।’
यसरी बनेका हरेक शौचालयमा ४५ घनमिटरको वायोग्याँस जडान गरिएको छ। यसबाट उत्पादन हुने विद्युतले शौचालय र लाइव्रेरीका लागि मात्र होइन, अन्य ६ घरलाई विद्युत खपत गर्न सकिनेछ।
यसको सन्चालनका लागि प्रत्येक शौचालयमा केही सटर व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएको छ। त्यसको आम्दानीले दैनिक प्रशासनिक तथा सरसफाईमा लगाइएको छ।
शौचालयमा कफी सप, हेयर शैलुन, स्मोकिङ जोन, अत्यावश्यक कपडा खरिद केन्द्र आदि छन्।
यी सबै शौचालयको रेखदेख र सफाइका लागि नगरभित्रका भुमिहीन डुम समुदायका ८ परिवारलाई आवासीय नै राखिएको छ।
‘वर्षौं सडक किनारामा बस्ने परिवारको जीवन परिवर्तन भएको छ’ यस शौचालयका परिकल्पनाकार दुलाल भन्छन् ‘मानवीय सेवाको सर्वोत्तम कार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ।’
यो शौचालय सन्चालनको जिम्मेवारी सय वर्षका लागि उद्योग वाणिज्य संघले लिएको छ।
शौचालय निर्माणका लागि दुलाल र उनको टिमलाई स्थानीयले पनि निकै साथ दिए।
घर नजिकै शौचालय बनाउने कुरा लिएर जाँदा सुन्नै नमान्ने छिमेकी अहिले हर्षित भएका छन्।
सबै शौचालयको निर्माण खर्च १३ करोड अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि ३५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले बेहार्ने छ भने बाँकी स्थानीय र उद्योगीको साझेदारीमा खर्च जुट्नेछ।
सुविधासम्पन्न लाइब्रेरी, इ–लाइब्रेरीसहितको सार्वजनिक शौचालय बनेपछि विभिन्न पालिकाले यसको मोडेल अपनाउन निरीक्षण गरिरहेका छन्। दुलालसँग यसको अवधारणा मागिरहेका छन्।
यस किसिमको सार्वजनिक शौचालय देशका सम्पूर्ण शहरमा अनिवार्य बनाइनुपर्ने उनको भनाई छ।
‘विराटनगर, दमकलगायत नगरका मेयरले यसको डिजाइन र निर्माणबारे जिज्ञासा राख्नुभएको छ। मसँग जोकोहीले यसबारे जान्न इच्छुक भए सहर्ष शेयर गर्न तयार छु’ दुलाल हर्षित छन्।
भन्छन् ‘मेरा एउटा भ्रमणले जुराएको यो कन्सेप्ट हाम्रो पालिकामा विस्तारै साकार हुँदैछ। अब यो पब्लिकको भयो। यसैगरी सबै शहरमा फैलिँदै जानुपर्छ।’